निद्रामा घुर्ने समस्या छ?शारीरिक तथा मानसिक असर पनि हुनसक्छ – Hotpati Media
निद्रामा घुर्ने समस्या छ?शारीरिक तथा मानसिक असर पनि हुनसक्छ
काठमाडाैं-नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. निर्मला तामाङका अनुसार धेरैको निद्रामा घुर्ने बानी हुन्छ, वरपरकालाई घुर्ने बानीले समस्या भए पनि आफूले घुरेको छु भन्ने आफैँलाई थाहा हुन्न । उनले निद्रामा घुर्ने बानी मोटोपना भएका र ज्येष्ठ नागरिकमा धेरै हुने जानकारी दिइन् ।
अल्पकालीन परिणाममा मुटुको चाल गडबड हुने तथा हृदयाघात (हार्ट अट्याक)देखि लिएर दीर्घकालीन रूपमा शारीरिक तथा मानसिक असरहरू हुन सक्ने भएकाले शङ्का लाग्नेबित्तिकै डाक्टरको परामर्श लिनु उचित हुने डा. तामाङको सुझाव छ । निद्रामा घुर्ने समस्या छ भने यसका लागि निद्रासम्बन्धी जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।